» अरुहरुले खर्च गर्दैनन् तर हामीले गछौं : शम्भु नकर्मी
८ बैशाख २०७७, सोमबार २०:३९
फष्ट भाइस डिष्ट्रिक प्रेसिडेन्ट ३२५बी २ नेपाल
मुलुकमा अहिले लकडाउन रहेको छ । लकडाउन भएको चौंथो हप्ता पूरा हुँदैछ । बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालमा पनि गत चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको हो । लकडाउन घोषणा भएसँगै नागरिकहरु कुनै न कुनै हिसावले प्रताडित छन् । पैदल हिँड्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा मकवानपुरमा रहेको लायन्स क्लबले अप्ठेरोमा परेका नागकिरहरुलाई साथ दिदै आइरहेको छ । मकवानपुरका बिभिन्न लायन्स तथा लियो क्लबहरुले अहिले सामाजिक अभियान संचालन गरिरहेका छन् । लायन्स र लियो क्लबहरुले गरिरेहको अहिलेको गतिबिधिहरुका बिषयमा केन्द्रित रहेर प्रहरखबरले लायन्स फष्ट भाइस डिष्ट्रिक प्रेसिडेन्ट ३२५बी २ नेपाल शम्भु नकर्मीसँग कुराकानी गरेको छ प्रश्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप :
अहिले सरकारले लकडाउन गरेको छ , यो अवस्थामा तपाईहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
लकडाउन भन्दा अगाडि हामीले सामाजिक जनचेतनामुलक काम गर्दै आइरहेका थियौं । लकडाउन भएपछि हामीले मान्छेहरु आत्तिएको देख्यौं । घरमा खाने कुरा नभएको हुन सक्छ । मानिसहरु लकडाउनपछि हिडेर जाने थाले । सबैभन्दा पहिला त हामीले रोयल पार्टी प्यालेस अगाडि लायन्स र टोल बिकास संस्थाहरुसँग मिलेर हामीले त्यहाँ काउन्सील जस्तो ग¥यौं । त्यहाँ पानी,चिउरा दालमोठहरु राख्यौं । उहाँहरुलाई खुवाउनका लागि । उहाँहरुले धेरै टाढाबाट आउनु भएको थियो । सयौं कोस पार गरेर । सयौंका संख्यामा आएका यात्रुहरुलाई खुवायौं त्यसपछि सरकारले अनुमपति पत्र उपलब्ध गराएको र माल सामानहरु छाडेर फर्किदै गरेका सवारी साधनहरुमा दुरी कायम गरेर अलिअलि गरेर हामीले पठायौं । लकडाउनको समय बढ्दै गएपछि खाद्यान्नको समेत अभाव भएको कुरा आयो । हामीले पैसा संकलन गरेर राहत बितरण गरेका छौं । हामीले ६ सय १५ घरमा राह बितरण गरेका छौं । हामीले त्यसपछि मास्क बनाएर अस्पताल तथा ब्यक्तिहरुलाई बितरण गरेका गर्यौं । अर्को समस्या टाढाबाट आएकाहरु भोकै रहनु भएका हुनाले उहाँको खानाका लागि ब्यवस्था मिलायौं । सबै ठाउमा खाना खुवाउन सक्ने अवस्था नभएपछि हामीले खाजा सेट तयार पारेर बस्तीपुर, कान्तिराजपथ सहित राटोमाटे तीन स्थानमा बसेर हामीले खाजा बितरण गरका छौं जसका कारण कोही भोकै बस्न परेको छैन । हामीले प्रहरी दाजुभाइालई पनि भनेका छौं त्यसैले कोही खान नपाएको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएमा हामी सहयोग गर्ने नै छौं ।
पहिला पनि जनचेतना गर्नुभएको थियो,त्यसो भए यहाँहरुले ?
हामीले त्यही बेला पनि गर्यौं । त्यही बेला लियोका भाइबैनीहरुले करिब करिब ५,६ दिन गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले कोरोना बिरुद्ध जुट्नका लागि भन्दै एउटा टीम बनाएका छौं । त्यसको संयोजक सम्राट सर हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक संजाल मार्फत उहाँले घरमा नै बसेर जनचेतना समेत फैलाइरहनु भएको थियो । त्यसपछि बाहिर धेरै समस्याहरु भएको कुरा सुन्नमा आएपछि हामी लागि परेका हौं । शुरुमा हामीलाई नागरिकहरुलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लानका लागि अनुमति थिएन । अहिले पनि छैन तर प्रशासन र अरु कसैले सहयोगको कुरा हामीलाई गरे हामी सहयोग गछौं तर अहिले चैं बिशेष कार्यक्रम भनेको खाजा बाँड्ने नै हो । र,हामीले सुरक्षामा खटिनु भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छौं ।
तपाईहरु कसरी परिचालन भइरहनु भएको छ त ?
हामी लायन्स र लियो सबै यो अभियानमा आवद्ध छौं । कोरोनामा यसैपनि धेरै मानिसहरु बसेर काम गर्न नहुने भएकाले जोसंग समय छ,फूर्सद छ उहाँहरुलाई आह्वान गरेका थियौं । २,४ जना आउनुहुन्छ । त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं ।
तपाइहरुले कसरी आर्थिक श्रोत जुटाउनु भएको छ अनि खर्च ब्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ नि ?
खाजाको अभियान संचालन गर्ने बेलामा हामीसंग कुनै बजेट थिएन । जति बजेट थियौं त्यो राहतमा सिध्याएका थियौं । साथीभाइहरुसँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा साथीभाइहरुले बाटोमा धेरै ब्यक्तिहरु बेवारिसे बनेको कुरा आएपछि हामीले साथीभाइ मार्फत सहयोगको प्रश्ताव गर्यौं,सामाजिक संजाल मार्फत कुरा राख्यौं त्यसपछि यत्ति ओइरिन थालेको छ कि हेर्नुस् जुस टनाटन,अण्डा टनाटन,तेल टनाटन,चिउरा टनाटन एकदमै भरिपूर्ण छ । हामीलाई समाज ब्यक्तिहरुको एकदमै साथ छ । हामीले गरेको कामले प्रभावित भएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । मनदेखि नै सहयोग गर्नुभएकाले पनि यो राम्रो काम गरेको स्वतः पुष्टी हुन्छ । अहिलेसम्म नगद र जिन्सीको हिसाव गरेको छैन तर हामी साथीहरु बसेर निकाल्छौं र सार्वजनिक गछौं ।
अघि यहाँले माथि पनि भन्नुभयो कोरोनामा भीड गर्नुहुन्न भनेर,तर तपाइहरु आफै चैं कत्तिको सुरक्षित भएर सहयोग गरिरहनु भएको छ नि ?
यसले मलाइ मात्रै समस्या गर्ने भएको भए त फरक कुरा हुन्थ्यो तर यसले त परिवारलाई असर गर्छ,सिंगो समाज र देश तथा बिश्वलाइ असर गर्छ नै । हामीले समयसमयमा डक्टर सापहरु आएर हामीलाई जनचेतना फैलाइरहनु भएको छ । त्यही अनुसार हामी मास्क लगाएर,पंजा लगाएर उहाँहरुको अगाडि कार्टुनमा राख्छौं अनि उहाँहरुले लैजानु हुन्छ । सचेत चैं हामी भइरहेका छौं ।
तपाइहरुका सदस्यहरुले समाज सेवाका लागि भन्दै रकम दिने गर्छन् तर खर्च चैं गलत क्षेत्रमा बढी हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि ?
सामाजिक सेवागर्नका लागि पक्कैपनि हाम्रो धर्मशास्त्रले भनेको छ नि खर्चको दश अंश दान गर्नु भनेर । अरुहरुले खर्च गर्दैनन् तर हामीले गछौं । भित्री मनबाट जसले सेवा गर्छ नि त्यही हो समाजसेवा । मान्छेहरुले पैसा धेरैभएर समाज सेवा गरेको होला भन्लान् तर होइन मन भएर हो । हाम्रो सबै पैसा समाजसेवमा लागी भएको हुन्छ ।साथीभाइहरुले दिनु भएको सहयोगको गलत ठाउँमा प्रयोग हुन्न । अरुले लुकाउन खोज्छन् तर लियो र लायन्सहरुले मनबाट नै सहयोग गर्देगर्दछन् । यसमा समस्या छैन । समाजमा एकैथरीमा मान्छे त हुन्नन् उनीहरुले कहिलेकांही यस्तो गरे होलान् तर समग्रमा लियो र लायन्सले गलत गर्दैन ।
यो अभियानमा स्थानीय सरकारहरुको साथ कत्तिको छ ?
उहाँहरुले एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ । हामीलाई आम नागरिहरुकोत साथ रहने नै भयो । उहाँहरुका लागि न लक्षित कार्यक्रम हो । मानवतासँग जोडिएको काम भएकाले लेखेर सिदन मिल्दैन । लकडाउन छ । त्यसैले तपाइहरुले गरेको कामको हामी खुसी छौं भनेर स्थानीय सरकार तथा प्रहरी प्रशासनले भनिरहनु भएको छ । उहाँहरुको साथले पनि हामीलाई ऊर्जा दिइरहेको छ ।
तपाइहरुले अहिले कुनकुन भूभाग हेरिरहनु भएको छ ?
अहिले हामीले वीरगन्जदेखि हेटौंडा हुँदै काठमाडौंको केही भाग र त्यसपछि यहाँबाट सिधा महेन्द्रनगरसम्मको सबै भूभाग पर्छ र त्यसको नेतृत्व आगामी जुलाइदेखि मैले गर्छु । लाइन्सका बिषयमा मलाइ गर्वका साथ भन्न मन लागेको छ कि कोरोनाका कारण वीरगन्जदेखि सबै ठाउँमा लायन्सहरु कृयाशिल छन् । जसले गर्वित बनाएको छ । नेपाल सरकारलाई ७० लाख बरावरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौं हामी ।
बाहिरबाट सहयोग आउनेक्रम कत्तिको छ ?
बाहिरी संस्थाहरुको पनि आफ्नै नियम हुन्छ । उनीहरुले बनाएको नीति भन्दा केही अलग रहेर केही थोरै थोरै फण्डहरु आएको छ । चारवटा डिष्टिकमा यो आउनेक्रम छ ।
राजनीतिक दलको साथ कत्तिको छ ?
बिभिन्न राराजनीतिक,धार्मिक सहितका समाजका जो पनि अटाउन सक्ने ठाउँ हो यो,यहाँ छिरेपछि यस्तो कुरा आउदैन । यसमा लागेर राजनीतिको रंग दिइयो भने त्यो आफैका लागि घातक हुन्छ । त्यस्तो गरियो भनेत्यो ठाउँमा नराम्रो भएको अनुभव हुन्छ । त्यो कुरा यहाँ हुदैहुदैन ।राजनीतिक दलको कार्यक्रम भएको भए त प्रचार कति हुन्थ्यो हुन्थ्यो नि होइन ?फेरि राजनीतिक दलको सहयोग चै छ ।
अन्त्यमा प्रहरखबर मार्फत छुटेका कुरा केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
यहाँहरुलाई धन्यवाद सहित यो खाजा कार्यक्रम सहित हामीले हात धुने साबुन देखेनौं । धारा असुरक्षित रहेको पनि पायौं अनि हामीले हेटौंडाको चारवटा क्षेत्रमा खुट्टाले छोएपछि पानी आउने ब्यवस्था मिलाएका छौं । हातले धारा धुँदा किटाणुको जोखिम रहने भएकाले बुद्धचोक सहितका केही स्थानमा यो ब्यवस्था मिलाउने प्रयासमा छौं । त्यस्तै अस्पताल लगायतका संवेदनशिल स्थलमा सेनेटाइजर गर्ने सोच र योजनामा छौं ।
हेटौंडामा कोभिड–१९ विरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप लगाउन सुरु
किर्गिजस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ
झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग, एक अर्बको राजस्व छली
खुँडा प्रहार गरी एक युवकको हत्या